Soa ho anao
Tombony ho anao
Fitsaboana TSY kofehy mifamatotra
Mahomby fifanarahana izay tsy mila mampiasa mpanampy anchoring rafitra ho an'ny nify displacements.
Hisoratra anarana ao amin'ny faritra voatokana fitsaboana ary nanomboka ny fanofanana fandaharana miaraka amin'ny lahatsary Mazava ho azy,.
Setup sy ny saron-tava raha maimaim-poana ny fitsaboana vita ny fahavitany, na raha toa ka very na tapaka ny saron-tava.
Azonao atao ny mandefa sary ny dian-tongotra mba misy foana ny nomeraon-telefaonina, ary mahazo ny valin'ny fanontaniana rehetra momba ny kalitaon'ny mitovy, izay azo fehezina amin'ny vahaolana avo Monitor mivantana; raha ny marary mbola ao amin'ny fianarana.
Fampiharana fanampiana SY POST PRODUCTION
Setup, con Video, notsongaina, maimaim-poana foana valet. Isika ihany koa azo misy fifandonana nandritra ny fampandrosoana ny raharaha.
Kit NY MARKETING Efitrano Bika Aman 'endrika
Tsindrio eto ary mangataka maimaim-poana bokikely mitondra ny latabatra na ny tany, fampahafantarana lahatsary sy bokikely ho an'ny marary.
hoentina’ Marina sy saron-tava FAST TAMIN'NY TSY Attachment Ultra Mangarahara
Biomechanics ampiharina amin'ny roa heny hametraka ny aligners FANALAVAM UP UP ary mampita hazavana sy hery foana isaky ny dingana sy ny fanerena hevitra (DIVOT) Family’ atao amin'ny orinasa mba hampihena ny criticality ny saron-tava aligners mono. Amin'ny extrusions sy ny rotations tsy miraiki-po. Ary vao mainka malefaka sy saron-tava madio miaraka amin'ny fanajana manam-paharetana kokoa, noho ny "Glass Mitsikia" teknolojia.
Voatokana Area Doctors
Copyright © 2016 Aligners Sangina
Mba hanome ny tsara indrindra fanompoana mampiasa ity toerana mofomamy. Tohizo variana ny toerana manome alalana ny fampiasana ny mofomamy.I manaiky Fantaro bebe kokoa
- Ny famantarana voalaza sy ny tsirairay dia tsy nanana Logos Paoly Protani fananana sitrapon'ny orinasa mifandray. Logos rehetra sy ny famantarana ny tsirairay avy no tompon'ny ary voalaza fa hanatsotra ny fikarohana ho an'ny vokatra mifanaraka. Fitsipika araka ny D.Lgs.196 / 2003 -